|||: June 2007
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 7:59 AM5comments: Links to this post
ဒီပုံပြင်က ဆရာအောင်သင်းရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတာပါ....
အရမ်းကြိုက်လို့ ကျွန်တော်အလွတ်ရပြီး သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ဖောက်သည်ချဘူးပါတယ်... ဒီမှာလည်းပြန်ပြောပါရစေဗျာ....
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ကန်စပ်တစ်ခုမှာ နွားကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်က အေးအေးလူလူ ငါးထိုင်မျှားနေသတဲ့...
ဒီလိုပဲနွာကျောင်းသာလေးကလည်း ကောင်းကင်ကြီးကို ရုတ်တရက်မော့ကြည့်လိုက်သတဲ့... အဲဒီမှာ သူကလေယာဉ်ပျံတစ်စင်းကိုတွေ့သွားတယ်.... ပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်...ငါနွားကျောင်းမယ့်အစား ကြီးလာရင်လေယာဉ်မောင်းတဲ့ ပိုင်းလော့ခ် ကြီးဖြစ်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ လို့စဉ်းစားလေတယ်...
နောက်ပြီး နွားကျောင်းသားလေး ရဲ့ဇွဲနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် အသက်ကြီးလာတော့ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်မောင်းတဲ့ ပိုင်းလောခ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားလေတယ်... တစ်နေ့သူ့တာဝန်အတိုင်း လေယာဉ်မောင်းနေတုန်း လယ်ကန်စပ်တစ်ခုက ဖြတ်သွားသတဲ့... အဲဒီမှာ အေးအေးလူလူ ငါးထိုင်မျှားနေတဲ့ နွားကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့သွားလေတယ်... သူ့ငယ်ဘဝကိုသတိရပြီး အင်း...ငါလည်းအဲဒီကောင်လေးလို လယ်ကန်သင်းရိုးတစ်လျှောက် အေးအေးလူလူ ငါးထိုင်မျှားရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲလို့ တွေးမိသတဲ့.....
ဒီပုံပြင်လိုပါပဲ....ကျွန်တော်တို့လူသားတွေက ချင်ခြင်းတွေများစွာနဲ့ ကိုယ်ရှိတဲ့ဘဝအစား တစ်ခြားဘဝအတွေ့အကြုံ တစ်ခုကို ကူးပြောင်းဖို့ကြိုးစားရင်း လိုက်ရင်းပြေးရင်း လိုက်ရင်းပြေးရင်း နောက်ဆုံး ငယ်ဘဝကို ပြန်ပြီး တောင့်တပြီး သံသရာလည်တတ်ကြစမြဲပါပဲ....
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 7:37 AM No comments: Links to this post
မင်းခိုက်စိုးစန်ရဲ့ ဝတ္ထုတိစုစည်းမှုပါ... ဖတ်လို့ကောင်းပြီး အမြဲတမ်းပြန်ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်ပါ...
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ နောက်ဆုံးဝတ္ထုတို ကမ္ဘာ...ဖတ်ပြီးတော့ကိုစွဲကျန်ရစ်စေပါတယ်...
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 7:21 AM No comments: Links to this post
လူတွေက ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့လူကို ဝိုင်းပြီးလက်ညှိုးထိုးတတ်ကြတယ်….
ဒီလိုပါဘဲ ကျွန်တော်လည်း ကုဋေရှစ်ဆယ်သူဠေးသားကို သူများလိုပဲ လက်ညိူးထိုးဘူးပါတယ်။ သေချာပြန်တွေးကြည့်မှ ကုဋေရှစ်ဆယ်သူဠေးသားမှာ အပြစ်မရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
သူ့မှာဘာအမှားရှိလို့လဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းက မိဘကလိုလေသေးမရှိ ခြေမွှေးမီးမလောင် လက်မွှေးမီးမလောင်အောင် ထားခဲ့။
အတန်းပညာတောင်မှ သားငယ်ပင်ပန်းမှာစိုးလို့ ပညာအမွေမပေးခဲ့။ ဒီလိုနဲ့သူဠေးသားက ယောင်နနနဲ့ လောကကြီးမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့။ ပညာမတတ်တော့မှ သိုထားမတတ်အရပ်အရပ်၌ ဆိုသလို ရှိသမျှအမွေတွေကို အပေါင်းအသင်းဘော်ဒါတွေနဲ့ သုန်းဖြုန်းပေတေခဲ့။ ဒီအပြင် များစွာကျွန်ပေါင်းမကောင်းခိုးယူ ဆိုသလို ရှိသမျှအမွေကို ဘတ်ကီးရိုက်တဲ့သူကလည်း ရှိသေးတယ်။ အိမ်ကိုရောင်း၊ ရှိသမျှထုခွဲရောင်းချ ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာ ကုဋေရှစ်ဆယ် အကုန် ပုစွန်တောင်မီးလောင် တက်တက်ပြောင်ရော။ ဒါတောင်သူက ခိုးဆိုးလုယက် ဓားပြတိုက်မစားဘူး။ ခွက်ဆွဲပြီးတောင်းစားတယ်။ ဘယ်မှာလဲ သူ့အပေါင်းအသင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေ၊ သူကောင်းစားတုန်းက ကြတော့အိမ်ပေါ်တက် ရှိသမျှအကုန် ယူငင်ပြီး သူ့မှာတစ်ပြားမှ မရှိတော့အဖက်လုပ်ဖို့ မပြောနဲ့
သင်သာလူမိုက် ဒုစရိုက်ဟု ရိုက်ပုတ်လိုက်ကြ
သူ့ကို ရိုက်ပုတ်ပြီး ရွာကနှင်ထုတ် သူ့ခမျာ တောမှာအသေဆိုးနဲ့သေရရှာတယ်။ ကဲ ဘယ်သူ့ကို လက်ညိူးထိုးမလဲ?
ဒါမှမဟုတ် နုံလွန်းအလွန်းတဲ့ သူဠေးသားကိုပဲလား?
သူ့ရှိနှိုက်စား ကိုယ့်ရှိဖွက်ထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပဲလား?
ပညာမတတ်လို့ ဒုက္ခရောက်တတ်ကြောင်းထောက်ပြချင်တာလား? ဒါပေမယ့် ပညာမတတ်တဲ့ မီလျံနာတွေ ဒုနဲ့ဒေး။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်ပြီး မိတ်ဆွေကောင်းအမှန်တကယ် လိုအပ်တာကိုပြောချင်တာလား? ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းဘယ်မှ မရွေ့ဘူးတဲ့။
သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် မေးခွန်းတွေအများကြီးရပါတယ်။ စောဒကတက်စရာ တွေလည်းအမျာကြီး ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော်လည်းသူများလက်ညိူးထိုးတိုင်း အလွတ်ကျက်ပြီး လိုက်ထိုးခဲ့ဘူးပါတယ်။
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 12:19 PM2comments: Links to this post
Intro: (E, B, C#, A)2
Chords: E, B, C#, A (Vamp)
V1. မင်းလမ်းလျှောက်တာ နောက်ကနေကြည့်တယ်
V2. နောက်လှည့်မကြည့်နဲ့ နောက်လှည့်မကြည့်နဲ့
CHO: ဆင်မယဉ်သာလေးရယ် ငါစွဲလမ်းနေမိတယ်
V3. မင်းအနားမှာ သရဲမတွေရှိတယ်
V4. ခါးကလေးစောင်းကာ သွားကလေးနင်ဖြီးတယ်
V2, CHO: , Fade out
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 7:49 AM No comments: Links to this post
မင်းကို အလွန်ဝေးတဲ့ BoonLay မှာ စွန်လေးတွေလွှတ်တုန်းက ကို စတွေ့ခဲ့တာပါ။
Chinese Garden မှာ Rhyme မိတအားဆန်းတဲ့ ကာရံတွေနဲ့ စကားလိုက်ပြောမိတော့
Lakeside မှာပိတ်ရိုက်လို့ လိပ်ကိုက်သလို ဖြစ်သွားမယ်လို့ မင်းညင်သာစွာ ရန်ထောင်တယ်လေ..
အဲဒီလိုနဲ့ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကို Jurong East မှာလူတွေချောင်းကြည့် တော့မင်းသ်ိပ်ရှက်နေတာပေါ့
Bukit Batok မှာလူလစ်မှ နှုတ်လိုက်တဲ့ မင်းရဲ့ ဆံပင်ဖြူတောင်ကိုယ် သိမ်းထားသေးတယ်။
Goambak မှာပုံအပ်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်နှလုံးသား တစ်ခုပါ။
မင်းက Choa Chu Kang မှာ ကြာမူဟန်နဲ့ တစ်ခါမူပြန်သေးတယ်။
Yew Tee မှာအပူမီးတွေတောက်လောင်တဲ့ ကိုယ့်နှလုံးသား အယူသီးတဲ့ လူကြီးသူမတွေရဲ့ဆုံးမစကား လည်းနားမဝင်တော့ဘူးပေါ့။ လှတာမက်ရင် ညစာခက်မယ်တဲ့။
Kranji မှာတဖန်မကြည်သလိုနဲ့ မင်း အလံနီတွေချည်းကိုယ့်ကို ပြနေတာပဲ။
Mrasiling မှာဒါပြီးရင် မနှောင့်ယှက်တော့ပါဘူးလို့မင်းကိုယ့်ဆီက ကတိတောင်းတယ်လေ..
ကိုယ်ကလည်းမထူးဇာတ်ခင်းပြီး Woodlands မှာ အခုနမ်းလိုက်ရမလားလို့မေးမှ မင်းကြောက်သွားတာပေါ့။
Admarilty မှာအမှန်ပစ်ပယ်ပြီး မသွားပါနဲ့။
ကိုယ့်နှလုံးသား Sembawang မှာ တဖန်အနာမခံနိုင်တော့လို့ပါ။
ကိုယ်ကံကောင်းပါတယ် Yishun မှာအပီမွန်းခဲ့တာ မင်းအချစ်တွေနဲ့ပေါ့။
Khatib မှာတော့ အထာအသစ်တွေနဲ့ ကိုယ့်ကို ညာမချစ်ပါနဲ့ကွာ။
Yio Chu Kang မှာ အို…သူပိုပြန်ပြီလို့တော့ မပြောလိုက်ပါနဲ့။
Ang Mo Kio မှာမင်းပြန်ငိုမှာကို ကိုယ်စိုးရိမ်လို့ပါ။
ဒီလိုနဲကိုယ်တို့ Bishan မှာအပီသရမ်းခဲ့ကြသေးတယ်လေ။
Braddell ကအပြတ်နွှဲခဲ့တဲ့ ရက်စွဲတွေကတော့ Censor ပေါ့။
Toa Payoh မှာအစ်ကိုတစ်အားဆိုးတာပဲလို့တော့ မပြောလိုက်ပါနဲ့။
Novenea မှာတို့ သမီးရည်းစား သက်တမ်း ၁ လပြည့်ခဲ့ပြီလေ။
မင်းကိုစတဲ့ Newton ကတစ်ယူသန်တဲ့ လူခံတွေနဲ့တောင်တို့ ရန်ဖြစ်ခဲ့လို့ အယူခံတောင်ဝင်လိုက်ရသေးတယ်လေ..
ကိုယ်တို့အချစ်တွေကတော့ Orchard မှာတောင်အတောမသတ်နိုင်ကြပါဘူး..ပြေစမှတ်ကိုဖြစ်လို့…
ဒါနဲ့ မင်းက Somerset မှာ အရမ်းလှထွက်နေလို့ ကို စိတ်ပူရသေးတယ်…
Dhoby Ghaut မှာတို့တွေ ဟိုဒီလျှောက်လျှမ်းလို့ ရဲစခန်းရောက်ခဲ့သေးတယ်လေ…
City Hall ကြတော့မင်းကကိုယ့်ကို ပြီးပြီးရော ဆက်ဆံတယ်ဆိုပါလား?
ကိုယ်တစ်ကယ် Raffles Place မှာအခက်အခဲတွေ့ ခဲ့တာပေါ့…
ဒီလိုအပျက်ပျက်နဲ့ ကိုယ်တို့ Marina Bay မှာ အစဉ်သာဝေးလို့ ရင်မှာဆွေးရပြီပေါ့ ကလေးရယ်…
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 9:10 PM3comments: Links to this post
မနက်ခင်းဆိုလည်း လာမနှိုးနဲ့ အိပ်ရာထဖို့ပျင်း
ပျင်းလွန်းလို့ မင်းနဲ့ အပျင်းပြေရည်းစားထားဖို့ပျင်း
ခေါက်ထားလိုက် ဆုံးမစကားတွေ နားထောင်ဖို့အတွက်ပျင်း
ခေါင်းကိုက်တဲ့ဒသနနဲ့ ဘဝကို ဖြုန်းတီးပြစ်ဖို့ပျင်း
အလုပ်နဲ့နပန်းလုံး ကြတဲ့လောကကြီးကို ပျင်း
ဘာမှမလုပ်ဘဲ ပျင်းရဖို့တော့ စံချိန်မီ
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 6:18 PM No comments: Links to this post